March 2018 – Hamro Lumbini
पोखरा, नयाँबजारको गण्डकी मिनी मार्केटले चर्चिएको पाँच रोपनी तीन आना जग्गा कृषि विकास ब्यांकको हो । ब्यांकको मुख्य शाखा कार्यालय, पोखराले स्थानीय केही व्यक्तिको कब्जामा रहेको यो जग्गा भोगचलन गर्ने प्रयास २०६९ सालदेखि गर्दै आएको छ, तर पाएको छैन । बमबहादुर कार्की, सन्तोष सोनाम र दिनेश दाहाल क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव रहेको समूहले उक्त सरकारी जग्गामा ‘मिनी मार्केट’ बनाएर […]
No Comments on विश्वकप क्रिकेट छनोट : नेपालले स्कटल्याण्डको सामना गर्ने
काठमाडौँ, २३ फागुन । जिम्बावेमा जारी आइसिसी विश्वकप छनोट क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेल बिहीबार स्कटल्याण्डसँग खेल्नेछ । जिम्बावेस्थित क्विन्स स्पोर्टस क्लबमा उक्त खेल हुनेछ । नेपालभन्दा स्कटल्याण्ड बलियो टोली मानिन्छ । नेपालले अहिलेसम्म स्कटल्याण्डलाई पराजित गर्न सकेको छैन । चार वर्षअघि न्यूजिल्याण्डमा भएको विश्वकप छनोटमा नेपाल स्कटल्याण्डसँग पराजित भएको थियो भने विश्वकप क्रिकेट लिगको दुवै खेलमा पनि नेपाल पराजित […]
No Comments on गीत चोरेको आरोपमा भुवन केसीविरुद्ध उजुरी
काठमाडौं, २३ फागुन । पछिल्लो समय चलचित्रकर्मीमाथि चलचित्रमा समावेश गरिएका गीत चोरिएको आरोप लाग्न थालेको छ । केही समयअघि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘कृ’मा समावेश गीत चोरिएको आरोप लागेको छ । आफ्नो गीत चोरेको भन्दै ‘कृ’ निर्माता सुवास गिरी र भुवन केसीविरुद्ध उजुरी लिएर निर्माता तथा निर्देशक शम्भु प्रधान महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुगेका छन् । तर, परिसरका डिएसपी मोहन थापाले […]
कोरियाली महिला संसारमै सुन्दर मानिन्छन् । उनीहरू आफ्नो सुन्दरतामा एकदमै सचेत हुन्छन् । साथै, सौन्दर्य बचाइराख्न विभिन्न उपाय अपनाउँछन् । यस कारण उनीहरूको अनुहारको छालामा सधैं चमक रहन्छ । तपाईं पनि कोरियन ब्यूटी टिप्स अपनाई आफ्नो अनुहार सुन्दर र चम्किलो बनाउन सक्नुहुन्छ : तातो टावेलबाट मसाज कोरियन केटीहरू आफ्नो सुन्दरता बढाउन तातो टावेलको मसाज लिन धेरै रुचाउँछन् । यसका लागि […]
तपाई कान दुखेर हैरान हुनु भएको छ रु कि तपाईको बच्चाले सधै कान दुख्यो भनेर सताइरहेको छ । अस्पताल जाँदा र आधुनिक औषधी खाँदा खाँदै पनि सञ्चो नभएर पिडित हुनु हुन्छ भने यो जानकारी तपाइको लागि हो । तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ तपाई हाम्रो भान्सामा सधै पाइने तरकारी प्याँज कान दुखाइको अचुक औषधी हो । कान सुन्निने, चिलाउने र संक्रमण […]
धेरै मान्छे खल्तीमा रुमाल राखेर हिँड्छन् । आफूसँग रुमाल राख्दा व्यक्तित्वमा राम्रो वा नराम्रो प्रभाव पर्छ भन्ने सुन्दा तपाईं आश्चर्यमा पर्न सक्नुहुन्छ । दिनैदिनै धोएको रुमाल प्रयोग गर्नुस् । फोहोरी रुमालमा नकारात्मकता हावी हुन्छ । अंक ज्योतिष अनुसार शुभ लाभको कामना गर्ने व्यक्तिले चार वा ६ फोल्ड गरेर गोजीमा राखेको राम्रो । रुमालमा पेन वा पेन्सिलले केही पनि नराख्नुस् । […]
No Comments on ४५ वर्षदेखि थन्किएको थोत्रो कारको मूल्य ७ करोड, यसकारण भयो बहुमूल्य
अमेरिकाको फ्लोरिडामा ४५ वर्षदेखि थन्किएको थोत्रो कारको मूल्यले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । मानिसहरुले यो कारलाई कवाडी सम्झिरहेका थिए तर यसको लिलामीको चर्चाले मानिसहरुको होस उडाइदिएको छ । यसको लिलामीको लागि न्यूनतम मूल्य मात्रै ७ करोड २० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबर राखिएको छ । यसको मूल्य यति धेरै तोकिएपछि मानिसहरु यसको मूल्य किन बढी भयो ? भन्ने जान्न निकै उत्सुक […]
हरेक महिना करिब दुई हजार बढीको हाराहारीमा साइकलको बिक्री हुँदै आएको नेपालगन्जमा हाल आएर नेपालमै पहिलो पटक आधुनिक किसिमको ‘बुलेट साइकल’ को बिक्री पनि यहाँबाट सुरु गरिएको छ । नेपालगन्जमा साइकलका लागि अग्रणी मानिएको बीबी साइकलले आफ्नै ब्रान्डको बुलेट साइकल यहाँ भित्र्याएर बिक्री सुरु गरेको हो । साइकलमा ३ सय ६५ भेराइटीको सेवा दिइरहेको दाबी गर्दै आएको बीबी साइकलका प्रबन्ध […]
यी हुन् नेपालकै अभागी कलाकार, जस्ले आफ्नै आमा बुवासँग सफलताको खुशी साट्न पाएनन् !
No Comments on यी हुन् नेपालकै अभागी कलाकार, जस्ले आफ्नै आमा बुवासँग सफलताको खुशी साट्न पाएनन् !
सन्तान सफल हुनुमा आमा बुवाको ठूलो भूमिका हुन्छ । आमा बुवाको साथ, सहयोग र हौसलाले नै एउटा सन्तानले जीवनको सही बाटो हिँड्ने अवसर पाएको हुन्छ । जसलाई आमा बुवाको साथ र सहयोग हुन्छ उसलाई जीवनमा अघि बढ्न सहज पनि हुन्छ । तर कसैलाई भने त्यो साथ मिल्दैन । तर पनि त्यस्ता व्यक्ति सफलताको चुचुरोमा पुग्न सकेका हुन्छन् । आज हामीले […]
२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले औसत आयस्रोत भएका मध्यम वर्गीय नेपालीलाई आफू बस्ने घर बलियो र सुरक्षित दुवै हुनुपर्ने रहेछ भन्ने चेत खोल्यो । तर, त्यो चेतनाले बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा, फलामे डण्डी, सिमेण्ट र इँटाको प्रयोग गरेर आरसीसी ढलान गरेका घर मात्र बलियो हुन्छ भन्ने बुझायो । भूगोलका हिसाबले अतिविकट नेपालका ग्रामीण बस्तीमा आरसीसी घर बनाउन महँगो र असहज […]